Brussels: B. Netanyahu, R/Wasaarihii u horreeyay Israel oo muddo 22 sano ah booqda Yurub – Kasmo Newspaper
Brussels: B. Netanyahu, R/Wasaarihii u horreeyay Israel oo muddo 22 sano ah booqda Yurub
Updated - December 11, 2017 3:24 pm GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ayaa booqasho uu ku tagay Brussels, kula kulmay Wasiirrada Arrimaha Dibadda dalalka Midowga Yurub, maalmo yar ka dib aqoonsigii Trump ee Qudus, isaga oo kulankiisa maanta, oo 11kii Disembar ah, kaga codsaday Yurub in ay raacdo go’aankii Trump.
Wasiirrada Arrimaha Dibadda Midowga Yurub ayaa si cad uga hadlay walaacooda ku aaddan aqoonsigii Trump 6dii Disember 2017 ugu aqoonsaday Qudus, in ay tahay Caasimadda Israel.
Madaxda Yurub waxay caddeeyeen in dhulalkii Israel ku qabsatay dagaalkii 6dii maalmood 1967kii oo ay ku jiraan Daanta Galbeed, Jerusalem iyo Buuraleyda Golan, ayan ka tirsanayn xuduudaha Caalamiga ah ee loo aqoonsanyahay Israel.
In kasta oo khilaafka Midowga Yurub iyo Israel sidaas yahay, Wakiilka Sare ee Siyaasadda Midowga Yurub, Federica Mogherini, waxay soo dhoweysay booqashada Netanyahu oo ay ku tilmaantay mid taariikhi ah, markii u horreysay, muddo 22 sano ah, oo R/Wasaare Israeli ah booqdo Yurub.
Mogherini waxay caddeysay in nabadgalyada Israel ku jirto in la helo xal suuragal ah oo dhammaystiran oo laga gaaro khilaafka Israel iyo Falastiin kuna fadhiya 2 Dowladood oo mid waliba Caasimad u tahay Qudus, si waafaqsan khadadkii 1967kii.
Khadadkii 1967kii waxay tilmaamayaan xuduudihii Israel iyo Falastiin kala joogeen ka hor dagaalkii 1967kii, markaas oo Israel ku darsatay dhulkeeda in ka baxsan “Khadkii cagaarnaa” ee xabbadjoojintii 1949kii dhexmartay Israel iyo Carabtii ku hareereysnayd.
Ka hor kulanka Brussels, Axaddii shalay, 10kii Disember, Netanyahu wuxuu Paris kula soo kulmay Madaxweyne Emmanuel Macron, kaas oo si cad ugu sheegay ka soo horjeedkiisa go’aankii Trump. Macron wuxuu kale oo Netanyahy u soo jeediyay in qaab kale oo nabadda loo siiyo fursad tahay iyada oo Israel joojiso dhul-ballaarsiga isla markaana aqoonsato Maamulka Falastiin.
Netanyahu ayaa dhankiisa hoosta ka xarriiqay in qodobka ugu muhiimsan nabadda uu yahay iyada oo loo aqoonsado dhinaca kale xaqa uu u leeyahay jiritaankiisa.